Sat, Jul 4, 2020 at 1:18am
राष्ट्रियसभाका १८ नयाँ सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
काठमाडौं, २१ फागुन । राष्ट्रियसभाका नयाँ १८ सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नवनिर्वाचित सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको खुहाएका हुन् । शपथ लिनेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी 'नेकपा' का १६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल 'राजपा'का दुई सदस्य छन् । शपथ लिनु हुनेमा इन्दिरादेवी गौतम, गोपीबहादुर सार्की अच्छामी, देवेन्द्र दाहाल, तुलसाकुमारी..
प्रधानमन्त्री ओली अप्रेसन थिएटरमा हुँदा पशुपतिमा विशेष पूजा
काठमाडौं, २१ फागुन । दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अपरेसन थिएटर लगिएको छ । अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. प्रेमकृष्ण खड्काले अस्पताल परिसरमा भेला भएका पत्रकारहरुलाई यो जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रा. डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको चिकित्सक टोली खटिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली र मिर्गौला..
युवराज खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं, २१ फागुन । मंगलबार राजिनामा दिएका डा. युवराज खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका हुन् । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अप्रेसन थिएटरमा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका हुन् । खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी अस्पतालमै पुगेका थिए । त्यहीँबाट खतिवडाको नियुक्तिको सिफारिस बनेको..
प्रधानमन्त्री अस्पतालमा रहेका बेला प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगे माधव नेपाल
काठमाडाैं, २१ फागुन । कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'का अध्ययक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रचण्डलाई भेट्न नेता नेपाल प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका बेला दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको हो । प्रचण्ड र नेपालबीच पार्टीको दुई नम्बर प्रदेशमा देखिएको विवाद, प्रदेश अध्यक्ष..
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको राजिनामा राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत
काठमाडौं, २१ फागुन । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको छ । सञ्चारमन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले मंगलबार उक्त पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्यमा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भई मंगलबार खतिवडाको पदावधि सकिएसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । खतिवडाले सम्हाल्दै आएका अर्थ र सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार..
छोरी जन्माउने आमालाई १० हजार, स्नातक गर्ने छोरीलाई एक लाख रुपैयाँ !
काठमाडाैं,२१ फागुन। रूपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न पालिकाले छोराछोरीबीचको शैक्षिक विभेद हटाउन विविध योजना अगाडि सारेका छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न स्नातक उत्तीर्ण गर्ने छोरीका लागि पुरस्कार घोषणा गरेको छ । स्थानीय स्तरमा छोराछोरीबीच देखिएको शिक्षाको विभेद हटाउन र छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षा दिलाउन गाउँपालिकाले यस्तो घोषणा गरेको हो । अब स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छोरीलाई गाउँपालिकाले पुरस्कार स्वरूप एक..
प्रधानमन्त्री ओलीलाई माधव नेपालले भने, मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आयो
काठमाडाैं,२१ फागुन। गत बुधबार साँझ सचिवालय बैठक सकिएर सबै हिँडिसकेका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिएलगत्तै अध्यक्षबाट फरक धारणा आयो । उता, कोटेश्वर नपुग्दै माधव नेपालको फोन बज्यो । ‘एकदमै जरुरी छ, तपाईं फर्कनुपर्ने भयो कमरेड,’ भनेपछि उनी फेरि बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आग्रह गर्दै भने, ‘वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नसक्ने मेरा केही बाध्यता छन् । मैले..
वालुवाटार ‘भित्रिया’ को चलखेलका कारण फसे लिलामणि
काठमाडाैं,२१ फागुन। मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार साँझ लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बेइजिङ पठाउने निर्णय गरेको छ । पन्ध्र दिनको भाका राखेर राजदूत पौड्याललाई फर्काउनुको कारणबारे बजारमा विभिन्न हल्ला व्याप्त छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मत नमिलेकोदेखि प्रचण्डसँग बदला लिनसम्मका हल्ला भएपनि भित्री र खास कारण अर्कै रहेको परराष्ट्रमा गाइँगुइँ छ । अहिले चलेको हल्ला सही हो भने पहिल्यै नै पौड्याल फिर्ता भैसक्नुपर्ने..
पूर्वडीआईजी शाहलगायत ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
काठमाडौ,२१ फागुन। अख्तियारले पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) महेशविक्रम शाह लगायत ४ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले मंगलबार शाहसहित ४ जनाविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । शाहमाथि मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र चितवन भरतपुर र मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली (सिन्धुली) मा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । शाहसहित लेखापाल प्रहरी..
ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणको तयारी यस्तो छ
काठमाडौँ, २० फाल्गुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गाैला पुनः प्रत्यारोपणको तयारीबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले औपचारिक जानकारी दिएको छ । मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालले बुधवार हुने प्रत्यारोपणका लागि तयारी शुरू गरिएको जानकारी दिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक औषधि दिन शुरू गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जानकारी..
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बिरामी, राजनीतिक भेटघाट बन्द
काठमाडौँ, २० फाल्गुन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिरामी परेका छन्। रुघाखोकी लगायत समस्या देखिएपछि प्रचण्ड सोमबारदेखि खुमलटारमै आराम गरिरहेको उनी निकट एक नेताले बताए। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै उनले मंगलबारदेखि राजनीतिक भेटघाटलाई केहीदिनका लागि पूर्णरुपमा बन्द गरेका छन्। चिकित्सकहरुले घरमै आराम गर्न सल्लाह दिएपछि उनले बाहिरका कार्यक्रम पनि स्थगित गरेको ती नेताले बताए। तीन दिनअघि आइतबार राष्ट्रियसभामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सम्वोधन गर्दै..
अर्थमन्त्री खतिवडासहित राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको कार्यकाल आज सकिँदै
काठमाडौं, २० फागुन । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । राति १२ बजेदेखि उनीहरुको कार्यकाल सकिन लागेको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको हाे । मन्त्रिपरिषदले पुनःनियुक्तिका लागि सिफारिस नगरे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल पनि आजै रातिदेखि सकिनेछ । “हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको भए दिउँसोसम्म जानकारी आउला,” राष्ट्रिय सभा स्रोतले भन्यो, “नभए उहाँको पनि सांसदको कार्यकाल आजै राति १२..
टिपरका कारण एक वर्षमै उक्कियो कालोपत्रे
काठमाडाैं,२० फागुन। राज्यले करोडौंको लगानीमा निर्माण गरेको सहिद–मार्ग सडक सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको चरम लापरबाहीका कारण अल्प समयमै जीर्ण बनेको छ। दाङमा रहेको सो सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा निकासी गर्न सडकको क्षमताभन्दा धेरै भार बोकेका टिपरहरू कुदाउँदा घोराही हुँदै रोल्पा होलेरीसम्मको सडक कालोपत्रे गरिए पनि उक्किएर कच्ची सडकभन्दा पनि जीर्ण बनेको हो। सिमेन्ट उद्योगका लागि वैकल्पिक मार्ग भए पनि त्यो प्रयोग नगरी टिपर चालकहरूले..
मोदीले गरे सबै सामाजिक सञ्जाल नचलाउने घोषणा
काठमाडौं,२० फागुन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै सामाजिक सञ्जाल नचलाउने घोषणा गरेका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नै उनले फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब र इन्स्टाग्राम त्याग्ने घोषणा गरेका हुन्। आगामी आइतबारदेखि सामाजिक सञ्जाल त्याग्ने उनले घोषणा गरेपनि मोदीका समर्थकले भने सामाजिक सञ्जाल नत्याग्न सुझाव दिएका छन्। मोदीको फेसबुकमा करिब ४ करोड, ट्वीटरमा ५ करोड र इन्स्टाग्राममा ३ करोड फलोअर्स छन् भने यूट्यूब च्यानलमा ४ करोड सस्क्राइबर छन्।..
कोरोना सङ्क्रमणका समय चीनमा प्रदूषण कम: नासा
काठमाडाैं,२० फागुन। विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव गर्ने गरी फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण चीनमा केही समयदेखि उद्योग तथा कलकारखानाहरूका गतिविधि घोषित तथा अघोषितरूपमा बन्द भएका छन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका अनुसार औद्योगिक गतिविधिहरूमा देखिएको अवरोध तथा सवारी साधनहरूको आवागमनमा आएको कमीका कारण चीनको वुहान र वरपरका क्षेत्रमा प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै घटेको छ । नासाको नक्सामा सुरूमा वुुहान र त्यसपछि वरपरका क्षेत्र हुँदै..
यसरी हुदैछ, त्रिविमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडाैं,२० फागुन। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जन प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको नेतृत्व गर्नेछन् । टोलीमा डा. पवनराज चालिसे, डा उत्तम शर्मा, डा. दिव्यसिंह शाह र डा. सुवास आचार्य रहनेछन् । यस्तै, नर्सिङतर्फको नेतृत्व पुनम सिन्हाले गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । प्रत्यारोपण पछि ५÷६ दिनमा आवश्यकता हेरेर डिस्चार्ज गरिने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले..
विमानस्थलमा मास्क अनिवार्य, तत्कालका लागि भिजिटर पास बन्द
काठमाडौं, फागुन १९ त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थल परिसरमा जाने सबैलाई अनिवार्य रुपमा मास्क लागाउन अनुरोध गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थल क्षेत्रमा मास्क अनिवार्य गरेको हो। कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो। यसका साथै कार्यालयले अत्यावश्यक काम नपरी विमानस्थल क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न समेत आग्रह गरेको छ। यसका साथै हाल प्रदान गरिँदै आएको..
चीन र कोरियाबाट आउने उडान रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ, १९ फागुन सर्वोच्च अदालतले चीन र कोरियासहित पाँच देशबाट आउने सिधा तथा ट्रान्जिट फ्लाइट रोक्न आदेश दिएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण धेरै देशले भाइरसको संक्रमण देखिएका देशबाट आउने उडान रोकेपनि नेपालले त्यस्तो निर्णय गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले जापान, बहराइन र इरानबाट हुने सिधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडानमा पनि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता पुर्ण..
काठमाडौं, १९ फागुन पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । उनी सोमबार साँझ अस्पताल पुगेका हुन् । उनको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण हुनेछ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्न्त्री ओलीलाई भान्जीले मिर्गौला दिनेछिन् । उनी पनि सोमबार नै अस्पताल भर्ना भइसकेकी छन् । अस्पताल भर्ना जानुअघि भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः..
नेकपा सचिवालयमा भयाे अप्रत्याशित ‘ब्रिफिङ’
काठमाडाैं,१९ फागुन। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आइतबार बिहानै सचिवालय बैठक बस्ने निधो टेलिफोनमा भयो । उनीहरूको निर्देशनअनुसार महासचिव विष्णु पौडेलले नेताहरूलाई बिहान साढे ११ बजे बैठक बस्ने सूचना प्रवाह गरे । बैठक आह्वान भएपछि नेताहरूले ‘वामदेव प्रकरण’बारे पक्कै छलफल हुने ठाने । ‘एजेन्डा जानकारी गराइएको थिएन । विवादमा राष्ट्रियसभाको मनोनीत एउटा कोटामा वामदेव गौतम वा डा युवराज खतिवडा भन्ने विषय थियो ।..
सुन्दर नाराभित्र क्रूर व्यवहार: नेपाल प्रहरी
काठमाडाैं,१९ फागुन। सर्वसाधारण नागरिक तथा समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल प्रहरीका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बोली, व्यवहार र आचरणका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने नारा लिएको प्रहरीसँग सर्वसाधारण नागरिक यसको जवाफको खोजीमा छन्। बिहीबार ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रहरी निरीक्षक तहको जिम्मेवार अधिकृतले काखमा नाबालक बोकेकी एक महिलामाथि लाठी बर्साएको घटनाले सर्वसाधारणलाई यसको जवाफ खोज्न बाध्य पारेको हो। ‘नेपाल प्रहरी र..
अनुदान रकमकाे चरम दुरूपयाेग
काठमाडाैं,१९ फागुन। डिभिजन वन कार्यालयमार्फत उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दीले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम पायो। संघले सहकारीमार्फत जडिबुटी उत्पादन, खेती बिस्तार, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अनुदान दिएको थियो। १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएपछि संघले गणेशटोलस्थित कार्यालयको माथिल्लो तलामा दुई कोठा थप्यो। ती कोठा संघले उद्देश्य..
ललिता निवास प्रकरण : राजदूत पौडेल फिर्ता बोलाउने निर्णय
काठमाडाैं,१९ फागुन। चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलाउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा राजदूत पौडेलको नाम जोडिएपछि उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी बैठकले एकनारायण अर्याललाई सचिवमा बढुवा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा पदस्थापन गरेको छ भने महानगरीय कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपानेलाई..
कोरोनाकाे प्रभाव : फागुन २४ देखि अन–अराइभल भिसा बन्द
काठमाडाैं,१९ फागुन। सरकारले फागुन २४ गते (मार्च ७) देखि सम्पूर्ण मुलुकका लागि ‘अन अराइभल’ भिसामा रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त भिसामा रोक लगाएको हो । नेपालले १३ मुलुकका नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन अराइभल भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतवार बसेको बैठकले नेपाल..
काठमाडौँ, १८ फागुन प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक गरिने मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी पूरा भएको छ । यही बुधबार महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा गरिने प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली सोमबार अस्पताल भर्ना हुँदै हुनुहुन्छ । आज सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्योपचारको योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रत्यारोपणका लागि भर्ना..
प्रचण्डलाई जुत्ता हान्ने रतन विप्लव कार्यकर्ता
काठमाडौँ, १८ फागुन प्रहरी स्रोतका अनुसार रतन तीन वर्षको हुँदा आमाले छाडेर गइन् । उनलाई बाबु मनु तिरुवाले हुर्काए । मनु माओवादी द्धन्द्धकालमा राज्य पक्षबाट मारिए । तर, उनको नाम माओवादीको सहिद सूचीमा छैन । बाबुको मृत्युपछि उनी काकाकार्कीबाट हुर्किए । पढाईमा जेहेन्दार रतनले सर्भे सम्बन्धि अध्ययन गरे । उनी सरकारी जागिर खान लोकसेवाको तयारीका लागि काठमाडौं आएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको..
प्रिमनसुन शुरु : दिनभर घाम लाग्ने, साँझपख मेघगर्जनसहित वर्षा !
काठमाडौँ, १८ फागुन यस वर्षको प्रि–मनसुन शुरु भएको छ । मार्च, अप्रिल र मेसम्म तीन महिना प्रि–मनसुन चल्ने भएकाले देशका पहाडी भू–भागको मौसम अपराह्न तथा साँझापख लगाातर प्रभावित भइरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । प्रि–मनसुनको प्रवृत्ति दिनमा घाम लाग्ने र अपराह्न तथा साँझापख मेघगर्जनसहित श्रणिक वर्षा हुने मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । “जाडो महिना सकिए लगतै स्थानीय वायुको प्रभाव..
प्रहरीसँग तिरुवाले भने– 'प्रचण्डको भाषण मन नपरेर जुत्ता हानें'
काठमाडौँ, १८ फागुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं पुराना कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृति दिवसका अवसरमा आइतवार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा जुम्लाका २२ वर्षीय रतन तिरुवाले प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार गरेका हुन् । हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका तिरुवाले प्रचण्डले कार्यक्रममा गरेको भाषण चित्त नबुझेकाले जुत्ता प्रहार गरेको प्रारम्भिक बयानमा बताएका छन् । प्रचण्डले..
राष्ट्रियसभा सदस्य बिवादबीच बस्दै सचिवालय बैठक
काठमाडौं, १८ फागुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा' को सचिवालय बैठक आइतबार बस्दैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद चर्किएका बेला नेकपा सचिवालय बैठक बस्न लागेकाे हाे । बैठक साढे ११ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाइएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकका खुलाइएको छैन । महासचिव विष्णु पौडेलले समसामयीक विषयमा छलफल..
निर्माण व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा बस्ताकोटी सर्वसम्मत
भक्तपुर, १८ फागुन। निर्माण व्यवसायी सङ्घ भक्तपुर कार्यसमितिको १९औँ साधारणसभा तथा सातौँ अधिवेशनले राजकुमार बस्ताकोटी अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले उहाँको नेतृत्वमा नगर समिति संयोजकसहित १७ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष निरञ्जन बजगाईंले जानकारी दिनुभयो । सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयकुमार देउजा, प्रथम उपाध्यक्षमा रत्नप्रसाद सुवाल, द्वितीय उपाध्यक्ष लब गिरी, महासचिवमा शिवहरि दाहाल केसी,..
Results 9727: You are at page 29 of 325